Usambofa wakavimba nevamwe. - Anotungamira - Quotes Pedia
Muhupenyu, tinouya tega toenda tega. Hupenyu parunopfuurira, tinoita hukama hwakawanda. Vazhinji vavo akakosha kwazvo kwatiri uye nokudaro kubatana kunowanikwa. Asi panofanirwa kuve pasina pundutso muhupenyu, hwkuti isu takanyanya kutsamira pane mumwe munhu zvekuti hatikwanise kuzvivimba pachedu.
Ziva nguva dzose, kuti isu tiri rutsigiro rwedu rukuru. Hazvina mhosva kuti ndiani anotisiya, hatizonzwa setisina rubatsiro, kana tikazviita vanokwanisa kutarisana nechinhu chinouya kwatiri. Kuti tiite izvi, tinofanirwa kuvaka simba repfungwa.
Isu tinofanirwa kuve nepfungwa dzinokwanisa kutarisana nechero dambudziko rega rega rinouya nenzira yedu. Isu tinofanirawo kuva takagwinya mumuviri kuti tifambe mune izvi nyaya. Saka, tinosisira kuzviisa mukuzviriritira. Izvi hazvifanane nekuva noudyire, asi kuzvitarisira kwakakosha pakakura kwemunhu.
Kana iwe uchiwedzera kuvimba nemunhu mumwe, iwe unowanzofunga kuti munhu iyeye anozotarisira matambudziko ako. Asi nekuda kwechikonzero chero chipi, mumwe munhu, zvisinei ari padyo, anogona kusakwanisa kuzadzisa vimbiso yake. Kana tisina kugadzirira mamiriro akadaro, saka tichaona zvakanyanya kuoma kunyange kuita, tirege tichiita pachiri.
Naizvozvo, zvinogara zvichirayirwa izvo kuti zvisavimba nevamwe. Kana isu tichinzwa kuti hatina humwe hunyanzvi huri kutitadzisa kuti tiite chimwe chinhu, saka pane kubvuma kushomeka kwehunyanzvi sekukunda, tinofanira kushanda mukukudziridza hunyanzvi ihwohwo. Izvi zvichatibatsira kusimudzira isu pachedu sevanhu uye tishongedze kuti tizvivimbe.
Quotes Pamusoro peKutsamira
Short Chivimbo Quotes
Ipfupi Yekukurudzira Quotes Yebasa
Kupfupisa Kuisa Quotes
Ipfupi Wisdom Quotes
Dzidza kuve wakanaka nevanhu vasingazive divi rako renyaya. Hamuna chamungaratidza kune chero ani. - Asingazivikanwe
Isu tinogaro kubereka zvibereko zvemabasa edu akanaka. Kuita zvisirizvo kunoita kuti zvinhu zviwedzere ku…
Zvinodya pfungwa dzako zvinodzora hupenyu hwako. - Asingazivikanwe
Pfungwa dzako ndidzo dzinonyanya kupedza pfungwa dzako. Zvakakosha kuti iwe uve nechokwadi chekuti wako…
Usatombo kunetseka nezve avo vanotaura kumashure kwako, vari kumashure kwako nechikonzero. - Asingazivikanwe
Iwe haufanire kuzvinetsa iwe pachako kufunga nezve vanhu vari kutaura kumashure kwako nguva dzese. Mu…